Puntland iyo Somaliland isku mid maaha | allsanaag
Puntland iyo Somaliland isku mid maaha
Maamulka Beelaha Isaaq ku midaysan yihiin ee Somaliland , Isimadooda iyo shacabkooda midna kama hadlin wixii ka dhacay xadka u dhaxeeya gobolada Bari iyo Sanaag, oo ummad Muslimiin ah oo suxuuranaysay lagu xasuuqay. Waxayna u muuqataa in taageersan yihiin kooxda aan magacyadooda iyo muuqaalkooda la garanayn ee weerarkan gaystay.
Maamulka Beelaha Puntland ay wada samaysteen , dawladoodu waa ka hadashay wixii halkaas dhacay, xildhibaanada Fedraalka ee dawladda Soomaaliya ee degaanadaas ka soo jeedaa iyaguna waa ka hadleen.
Shacabkii Puntland ilaa maalintii xasuuqu ka dhacay buuraha CALMADOW safaf dhaadheer ayeey ugu jiraan sidii ay dhiigooda ugu deeqi lahaayeen Askarta iyo shacabka ku soo dhaawacmay weerarkas oo Cisbitaalada yaala. In badan oo ka mid ah bulshada Puntland iyaguna labadii maalmood ee ina soo dhaafay waxay samaysteen Kijooyin waaweyn oo ay cunto ugu karinayaan dhaawaca
Halka bulshada Puntland intooda badani ayna aqoon magacyada muuqaalka , iyo wejiyada dadkii weerarka soo qaaday, in badan oo ka mid ah Saraakiisha Beesha Isaaq iyagu waa kuwo og magacyada, muuqaalka iyo beelaha ay ka soo jeedaan dadkii werarkan soo qaaday. Sababtoo ah iyaga ayaa soo tababaray.
Hoos ka daawo shacabkii reer Puntland ee Camo, Ceeldaahir iyo jiingadda oo safaf ugu jira inay dhiig bixiyaan
Hoos ka akhriso qoraal ay soo msaaren beesha Isaaq oo haba yaraatee aan lagu xusin tacsina loogu dirin bulshadii ay sheegan jireen ee Buurta Calmadow
← Mashaariicdii sucuudiga oo la ogolaaday Diyaaradda Qadar oo dulmaraysa Hargaysa →